Nanatitra bodofotsy hoan’ireo mararin’ny valanaretina pesta teny amin’ny hopitaly Ambohimiandra ny sampana misahana ny fahasalamana avy ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Raha ny hita teny an-toerana, efa miha-vitsy ireo marary ao amin’ ity toeram-pitsaboana ity. Nankasitraka ny fanomezana nomen’ny kaominina ireo marary sisa tavela.
Raha ny tatitra navoakan’ny BNGRC, 10 ireo trangana pesta vaovao voarakitra tamin’ny 7 novambra teo. Teto Antananarivo ny efatra ary tany amin’ny faritra Amoron’i mania ny efatra hafa. Tany Vainankaratra kosa ny roa. Tsikaritra ho efa miha lefy ity resaka pesta ity tato anatin’ny roa herinandro izao. Na ny olona eny an-dalana aza efa tsy dia miresaka izany intsony.
Hivory indray ireo filohan’ny toeram-piantsonan’ny taxi eto an-dRenivohitra ny asabotsy ho avy izao hidinika ny ho tohin’ny hetsika momba ny fitakiana ataon’izy ireo tsy fanekena ny Omavet sy ny lanterne lehibe, izay voizin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, araka ny fanambaran’ny filohan’ny mpitondra taxi eto Antananarivo ( FTAR), Raharinirina Clémence, omaly. Miandry ny valin-teny avy any amin’ny mpitantana ny kaominina sy ny minisiteran’ny Fitaterana izy ireo hatramin’ny asabotsy mialoha ny handraisana fanapahan-kevitra iraisan’ny mpitondra taxi ao amin’ny FTAR.